Uru nke Igwefoto Igwe na Hosplọọgwụ - OMG Solutions
Uru nke igwefoto-Worn Camera na Hosplọ ọgwụ
Jiri igwefoto-Worn Camera Jiri Ahụike Ahụike
Sayensị na teknụzụ ekpuchiwo ụwa kpamkpam n'ime afọ ole na ole gara aga. Anyị nwere ike ịhụ ọtụtụ ihe ọhụụ na-arụpụta kwa ụbọchị maka ịdị mfe na nkwado anyị. Ihe omuma nka a bu ihe o bula banyere onye obula. Nche na ikpuchi abụrụwo nnukwu ihe ịma aka ugbu a ụbọchị. Anyị ahụla ọtụtụ ọnụọgụ dị iche iche maka nsogbu nchekwa. Otu n’ime ihe ndị kacha rụọ ọrụ nke ọma taa bụ Body Worn Cameras.
Ahụkasị ahụazu Ahụ bụ kamera pụrụ iche nke na-enyere mmadụ aka nkwado na nkwado ndabere na mpaghara. A dikwasiri ya n'ahụ onye ọrụ ya, ọ na-edekọkwa ihe onye ọrụ na-ahụ. Igwefoto ahụ na-eyi n'ahụ na-ewere ọnọdụ dị ugbu a otu ụbọchị. Dịka ha siri rụpụta ihe ma baa uru.
Thelọ ọrụ ndị uwe ojii ka eji rụọ igwe eji eme ihe maka na-enyere ndị uwe ojii aka na nyocha ha, ajụjụ ọnụ na nyocha. Mana ugbu a, amalitela iji ha na ngalaba ndị ọzọ. Ihe atụ kachasị mma maka iji ha bụ na ebe nlekọta ahụike.
Jiri igwefoto mee ahu ya.
Ebe nlekọta ahụike amalitela iji igwefoto ahụ na-eyi maka ọtụtụ ebumnuche. Ihe a malitere ka afọ ole na ole. Nke kachasị, a na-eji kamera ahụ na-eyi eme ihe maka ikpuchi na idekọ n'ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ndị a. N'agbanyeghị nzube a, igwefoto ndị a nwere ọtụtụ ngwa ndị ọzọ. Otu ihe dị mkpa eji ese foto ndị a bụ inyocha akparamaagwa ndị ọrịa nwere nkwarụ. Igwefoto ahụ na-eyi n'ime ahụ belatala akparamaala ndị ọrụ nlekọta ahụike na-ebuso ndị ọrịa na ndị na-eso ya aka. Nke a butere mgbada ime ihe ike n’ụlọ ọgwụ na ụlọọgwụ. A na-ejikwa kamera ndị mebere ahụ na-arụ ọrụ na ndị nọọsụ iji nwalee nkà ha na ịkọwapụta mmejọ ha. Na mkpokọta, anyị nwere ike ịnwe ọtụtụ ngwa nke igwefoto ahụ nwere, mana, n'echiche anyị, ekwesighi iji ya na ụlọ ọrụ nlekọta ahụike ka ọ na-akpaghasị nzuzo nke ndị ọrụ ụlọ ọgwụ yana ndị ọrịa na ndị nọ ha nso. Ka anyị leba anya n’akụkụ ndị a niile wee rụpụta ezigbo ihe.
Ka anyị leba anya n'ụfọdụ ihe igwefoto ahụ na-eme na ebe nlekọta ahụike.
Nche na onyunyo:
Nche bụ otu n’ime nsogbu ndị siri ike ndị mmadụ na-enwe ugbu a n’ụbọchị. Ya mere, ha na-eji ụdị nchekwa dị iche iche maka ebumnuche a. Dịka anyị na-ekwu maka igwefoto ahụ nwere, ka anyị lelee arụmọrụ ha na ebe nlekọta ahụike. Ebe nlekọta ahụike amalitela iji igwefoto ahụ na-eyi maka nchekwa na ebumnuche ha. A na - ejikọ kamera ndị a na ozu nke ndị nche na - eguzo n'ọnụ ụzọ nke ọnụ ụzọ. Must ga-echerịrị na gịnị kpatara na ha ejighi igwefoto CCTV maka ebumnuche a. Mana ọ bụrụ n’anyị hụ, iji igwefoto ahụ mmadụ eyi mezuru ebumnuche abụọ ma nwekwa ọtụtụ uru.
Na mbu, igwefoto ndi ahu nwere ike inye onyunyo na ihe omuma gi n’iile n’iile. O nwere akuku kariri ya na mbughari ya. Ya mere, ọ nwere ike kpuchie mpaghara ka ukwuu maka idekọ.
Nke abuo, o gha edekọ omume nke ndi nche nke nwere igwefoto kegidere n’ahu ha. N'ihi ya, ha ga-egosipụta ezi omume n'ebe ndị mmadụ nọ. Ọ ga-eji ọnụ ọgụgụ dị ukwuu belata ọnụ ọgụgụ nke ihe ike. Yabụ, anyị nwere ike ịhụ nke ọma na igwefoto ahụ na-eme ka ọ dị irè karịa.
Njikwa Ime Ihe Ike:
Ime ihe ike abụrụwo nnukwu nsogbu n’ebe ndị mmadụ na-ezukọ. Otu ihe a bụ ebe ụlọ ọrụ ahụike dị. Ihe omume nke ime ihe ike nwere ike imebi oke ihe owuwu ahụ nke ukwuu ma nweekwa nsogbu ndị ọzọ na ndị na-eso ya. Anyị enweghị ike ịtụ anya naanị n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ndị ọrụ nchekwa iji gosi ndị mmadụ ihe ike. Mana kwa, enwere ọtụtụ mgbe ndị ọrịa na-ebute ihe ike dị ukwuu na nke kpatara nsogbu maka ụlọ ọgwụ na kwa, ọgba aghara maka ndị ọrịa. Maka nke a, anyị na-eji igwefoto eyi. A na-eji igwefoto a nyochaa omume nke ndị ọrụ na-ebute ndị ọrịa. Ebe kamera dị n'ahụ ha, ndị ọrụ ahụ ga-anwa ike ha igosipụta omume ọma. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na onye ọrịa ọ bụla ma ọ bụ onye na-eje ozi gosipụtara ime ihe ike ọ bụla, ndị ọrụ ahụ nweere onwe ha ịgwa ha na a na-edekọ ha. N'ụzọ dị otu a, igwefoto ahụ na-eyi nwere ike inye aka dị ukwuu n'ịchịkwa ime ihe ike n'ụlọ ọrụ nlekọta ahụike.
Nlekọta na Ọzụzụ Dọkịta:
Igwefoto ndị na-eme ka ahụ mmadụ nwee ihe ọzọ dị irè eji arụ ọrụ nlekọta ahụike. A na-eji ha nyochaa nkà nke ndị dọkịta obere na ndị nọọsụ site n'aka ndị okenye. A na-enye ndị nọọsụ ọzụzụ pụrụ iche maka ọrụ ha. Ha nwere ọrụ ilekọta ndị ọrịa ha, nye ha ọgwụ na ilekọta mkpa ha. Ha na-enyekwara ndị dọkịta aka ịnagide onye ọrịa. Omume nke ndị nọọsụ dị ezigbo mkpa. Anyị atụleworị na eji kamera ndị ahụ metụtara ahụ iji nyochaa omume ha. Ma n'otu oge ahụ, enwere ike iji ya nyochaa nkà ha.
Enwere otutu ndi dibia di elu ma obu abuo n’ulo na eduga ndi otu ndi dibia bekee. Ha nwere ike nyochaa ntakịrị ha ma nwee ike ịkọwa mmejọ ha. Nke a na-enye ha ohere izi ndị na-eto eto ha ihe nfe.
Ekwesịrị ịhapụ ka esere ahụ maka ahụ ike na ebe nlekọta ahụike?
Teknụzụ igwefoto ahụ na-eyi na gburugburu ebe a na-elekọta ahụike bụ nnukwu nchegbu gbasara atụmanya nzuzo nke ndị ọrịa na ndị ọbịa. N’uche m, ojiji nke kamera ndị a na-eyi n’ahụ ga-abụrịrị ndị ọrụ nchekwa na ndị uwe ojii na-abịa n’ụlọ ọgwụ ahụ maka nkwupụta ma ọ bụ nyocha ọ bụla. Enwere ụfọdụ ndị a na-agba ajụjụ ọnụ na onye akaebe ịgba akaebe nke ndị ọrụ mmanye iwu na-arụkarị n'etiti ụlọ ọrụ ahụike. Gịnị kpatara anyị ji amachi ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa ihe igwefoto anyị? Ka anyị leba anya n’ihe kpatara nke a:
Mwepu kachasị nke Ahụrụ Came Ara na Ahụike Ahụike:
Igwefoto ndị ahụ na-eyi n'ime ahụ nwere ọtụtụ uru site na ojiji ha na ụlọ ọrụ nlekọta ahụike mana n'otu oge ahụ, enwere ọghọm dị njọ na-emebi ihe ọma niile igwefoto na-eme. Nsogbu ahụ bụ “Nzuzo nke Ndị Ọrịa ”.
Ebe nlekọta ahụike juputara na ndị mmadụ oge kachasị. N'okwu a, enwere ọtụtụ ndị achọghị ka nzuzo ha gbochie ha. Mana ezigbo ọnụ ọgụgụ igwefoto ahụ na-eyi anaghị ekwe ha mee ya. Ebe imirikiti ndị otu nke ndị ọrụ jiri kamera na-eyi uwe, ọ na-esiri ndị mmadụ ike ịchekwa onwe ha. Anyị enweghị iwu na iwu a kapịrị ọnụ ugbu a na-akwado iji igwefoto ahụ mmadụ yi n'ahụ iji mebie ihe nzuzo nke mmadụ. Nke kachasị mkpa, enwere ọtụtụ ndị ọrịa, nke nọ n'ọnọdụ dị oke njọ. Ndị ọrụ ahụ enweghị ike iji igwefoto maka nkuzi ma ọ bụ ebumnuche nyochaa omume ma ọ bụrụ na ọ na-emebi nzuzo nke mmadụ. Nke a bụrụzie ụdị iwu na-akwadoghị nke na-emebi aha ụlọ ọrụ ahụike ma mekwaa obi ndị na-eso ụzọ na ndị ọrịa ahụ enweghị obi ụtọ nke bụ ihe jọgburu onwe ya. Yabụ, gịnị kpatara anyị ji achọ ụdị ngwa a nke na-emebi akụkụ adịghị mma karịa ka ọ na-enyere ya aka? Ihe a ga - eduga na ọdịda nke igwefoto ahụ na-eyi n'ime ụlọ nlekọta ahụike.
Esi edozi nsogbu a?
Facilitieslọ ọgwụ ahụ ike taa anaghị ebi ndụ dị ka ndị ọrịa ha si ele anya. Nke a bụ n'ihi na iji igwefoto ahụ mmadụ na-eme na-emebi ihe nlekọta ahụike ozugbo site na-akpaghasị nzuzo nke ndị na-eje ozi na ndị ọrịa. Anyị enwere ike ịbute ụzọ iji dozie nsogbu a?
Nchegbu anyị kachasị bụ ebe nzuzo, nke a na-enye nsogbu site na ịdekọ onye ahụ na igwefoto mgbe ọ chọghị ịbanye na ya. Ọ nwere ike nweta ya. Ekwesịrị ị belata ọnụ ọgụgụ igwefoto ahụ ga-ebelata oke oke. N'enye ọnọdụ ahụ, ekwesighi ịhapụ ndị ọrụ ahụ ka ha jiri igwefoto ahụ yi n'ahụ. Ekwesịrị ka ahapụ ya n'aka ndị ọrụ nchekwa nke na-anọgide n'ọnụ ụzọ ụlọ ọrụ ahụ. N'ihi nke a, enwere ike izere obere igwefoto nwere ike iwepu ihe kpatara nsogbu nzuzo.
Ọzọkwa, a ga-enwerịrị ndị otu ndị okenye nọ n'ọnọdụ dị mkpa ga - aza maka ihe ndekọ niile nke igwefoto mere. Ha aghaghi idebe ihe ndia dere na ha ma aghaghi idowe ha. N'ụzọ dị otu a, ndekọ a ga-anọ na nchekwa ma ọ ga - enyere ndị ọbịa na ndị ọrịa ahụ aka.
A gha aghaghi inwe ụfọdụ iwu na otu mmezi nke n’egosiputa uzo kwesiri ekwesi. Mgbe ahụ akụkụ abụọ ahụ ga-erubere iwu ahụ isi. Ọ ga-emepe iji kamera ndị ahụ na-eme ahụ na ihe owuwu ahụ ruo oge ụfọdụ, n'otu oge ahụ, ọ gaghị akpaghasị nzuzo nke ndị ọrịa.
Nzuzo 5727 3 Echiche Taa